yummy ကျွန်း (Yummy Island) - 2Game
yummy ကျွန်း (Yummy Island)
ကမ်ဘာပျေါတှငျငှက်ကလေးကျွန်းမှကြိုဆိုပါ၏! yummy ကျွန်း ရှိ. မိုဃ်းတိမ်တို့ကိုအထကျမွငျ့မားတဲ့ floating ကျွန်းတွင်, သငျသညျအရသာရှိတဲ့ရယူထားသောတစ်ဦးပြိုးပြိုးပြက်ပြက်အမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
ရေခဲမုန်, Lollipop, ချောကလက်တွေ, cookies, macarons, သကြားလုံးကြံ, gummy ဝံနှင့်သကြားလုံး galore! သကြားလုံးကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူတဲ့ကြည်နူးဖွယ် 3D သူဌေးကြီးခံစားရသည်။
အဆိုပါ fluffy တွေ့ဆုံရန်။ ဤရွေ့ကားချစ်စရာနည်းနည်းသတ္တဝါများသကြားလုံးအောင်များအတွက် knack ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရေခဲမုန့်တစ်မျိုးကတော့နှင့် macarons နှင့်အတူ Sugary-ချိုမြိန် Puff သူတို့ yummy ကျွန်းပေါ်တွင်သင်၏သကြားလုံးလယ်ယာအပေါ်သင်တို့အဘို့အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်၎င်း၏ Goodies ထွက်အလွန်အမင်းပါလိမ့်မယ်။ Home-စိုက်ပျိုးသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူသူတို့ကိုထောက်ပံ့, သူတို့သင်ဂြိုဟ်ပေါ်တွင် tastiest ရယူထားသောပေးပါလိမ့်မယ်။ စကြဝဠာထဲမှာပင်! ဖောက်သည်များကသင်၏ရေခဲမုန့်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အကြပ်အတည်း cookies တွေကိုအမြည်းမှဝဠာတိုင်းထောင့်ကနေသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်လယ်ယာမှလာကြလိမ့်မည်။ သင်သည်သူတို့၏သကြားလုံးအမိန့်ဖြည့်ရန်အဘို့အနည်းနည်း UFOs အတွက်န်းကျင် Bobbing, သူတို့ကစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ yummy ကျွန်း Expand နှင့်ထူးခြားသောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာတွေနဲ့စိတ်ကူးယဉ်လယ်ယာ features တွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ထူးခြားသောဂိမ်းခံစားရသည်။
🍭 Candy နှင့်ထိုကဲ့သို့သော macarons, သကြားလုံးကြံ, Lollipop, licorice, ချောကလက်နှင့် cookies များကိုကဲ့သို့ချိုရယူထားသော
🍭သူတို့ရဲ့သကြားလုံးလယ်ယာပေါ်တွင်သင်၏ fluffy များအတွက် Quest များနှင့်တာဝန်များကို Captivating
🍭သင်လက်ရာမြောက်သောအထူးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့ကိတ်မုန့်နှင့်အယိုစတိုးဆိုင်ကနေမီးဖိုချောင်နှင့် pastry ဆိုင်မှာမှထုတ်လုပ်မှုအဆောက်အဦး၏တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်မျိုးစုံ,
သင့်ရဲ့ yummy ကျွန်းများအတွက်🍭ချဲ့ options များ
🍭မရေမတွက်နိုင်တဲ့အလှဆင်သစ်ပင်များကနေ, သင့်ပျံကျွန်းတက် Spruce ရန်နှင့်ရေပေါက်ရေတွင်းများနှင့်တကွတဲမှ hydrangeas နှင့်စားပွဲကျော်ကုလားထိုင်အဖျားခတ်
yummy ကျွန်း – ပု Candy လယ်ယာမှပိတ်!
ကိုယ့်ကိုကိုယ် yummy ကျွန်းအားဖြင့်ထူးဆန်းစေကြလော့။ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂိမ်းဤလောကသို့ပျံဝဲနှင့်သင့်တိုင်းဆန္ဒနှင့်အညီသင့်ရဲ့ပျံကျွန်းဒီဇိုင်း။ လုပ်ပေးဖို့, နေကြာ, haybales နှင့်နှင်းဆီပန်းအတူကအလှဆင်။ စက်ရုံသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။ သင့်ရဲ့အသီးအနှံရိတ်နှင့်သင့် fluffy ထိုကဲ့သို့သောချောကလက်တွေ, cookies, သင်၏သကြားလုံးလယ်ယာအပေါ် Lollipop အဖြစ်အရသာရှိတဲ့ရယူထားသောသို့သူတို့ကိုငါကို process ကြကုန်အံ့။ , သင့်ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ In-ဂိမ်းငွေရှာနှင့်သင့်စိတ်ကူးယဉ်လယ်ယာကျွန်းတိုးချဲ့!
Android အတွက် yummy ကျွန်း (Yummy Island) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ yummy ကျွန်း (Yummy Island) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, yummy ကျွန်း (Yummy Island) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် yummy ကျွန်း (Yummy Island) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ yummy ကျွန်း (Yummy Island) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် yummy ကျွန်း (Yummy Island) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!